Namono olona indray ny lalan’ny Frankofonia : potika ilay 4×4 V8, roa namoy ny ainy | NewsMada
Namono olona indray ny lalan’ny Frankofonia : potika ilay 4×4 V8, roa namoy ny ainy
Par Taratra sur 13/09/2017
Goavana ny fahapotehana tamin’ilay fiara vaovao be, 4X4 Toyota Land cruiser V8. Mpandeha roa tao anatiny no maty, naratra mafy kosa ny fahatelo. Teo amin’ny fihaonan-dalana, lalana digue sy ny lalan’ny frankofonia indray no nisehoan’ity lozam-pifamoivoizana nahatsiravina, omaly ity.
20 andro taorian’ny lozam-piarakodia teny Ambodihady Digue nahafaty ilay kandidà isan’ireo nifaninana tamin’ny minisitra Maharante tamin’ny fifidianana ny filoha hitarika ny Fikambanan’ny zanaky ny faritanin’i Toliara (Fizafato), nidofotra teo amin’ity toerana nitrangan’ny loza farany teo ity koa, ny fiara 4×4 Toyota Land Cruiser V8 iray, omaly alina.
Araka ny fitantaran’ireo olona mipetraka eo amin’ny manodidina ny toerana nitrangan’ny loza, mitovy tanteraka tamin’ilay lozam-piarakodia nahazo an’i Berkley sy ireo namany ity loza nitranga omaly alina ity. Avy any amin’ny lalam-baovao “Rocade” mivoaka eny akaikin’ny sampanana mihazo an’Ambohitrimanjaka ity fiara 4×4 Toyota ity kanjo tra-doza tampoka vokatry fandehanana mafy. Nandeha mafy ilay fiara satria manaporofo izany ny fanjaitra manondro ny hafaingam-pandehany izay mbola nijanona teo akaikin’ny 200 km isan’ora, raha ny fahitana izany teny an-toerana. Tsy voafehin’ny mpamily intsony ilay fiara ka tafahanika ny dongona manasara-dalana (ilot) eo amin’ny lalana mihazo ny Digue mankany Andranomena ka nifatratra teo amin’ny rindrim-bato manamorona ny Digue satria tsy nahita ilay fiviliana ny mpamily. Rava mihitsy ireo rindrim-bato rehefa notrongisin’ilay fiara V8. Potipotika sady niforitra ny lohan’ny fiara. “Tafavoaka avy ao anaty fiara ilay olona nipetraka teo amin’ny seza akaikin’ny mpamily raha nifampisokirana tao anaty fiara kosa ny mpamily satria tery tao anaty motera”, hoy ny fitantaran’ny renim-pianakaviana iray mipetraka akaikin’ny lalana Digue.
Mitaraina noho ny tsy fetezan’ity lalana “Rocade” ity ny olona…
Nentina haingana teny amin’ny hopitaly manara-penitra sy HJRA ireo naratra, saingy tsy avotra intsony ny ain’ireo olona roa tao anatiny vokatry ny dona mafy nahazo ilay fiara. Mbola manaraka fitsaboana eny amin’ny hopitaly kosa ilay olona fahatelo isan’ireo naratra mafy, saingy atahorana ny ainy noho ny ratra mafy nahazo azy, araka ny fanazavana voaray farany.
Manoloana ny lozam-piarakodia nitranga tamin’iny lalana iny, maro ireo olona mitairana noho ny tsy fetezan’ny lafiny teknika tamin’ny fanamboarana ity lalana “Rocade” ity. Tokony hisy jiro eo amin’ny “ilot” satria maizina ny lalana ka tsy hitan’ny mpamily ny fisian’io “ilot” io ka tafahanika eo ambonin’izany ny ankamaroan’ireo fiara.
Ekena fa lalana tokony handehanana mafy iny lalana iny, saingy misy koa ireo mpamily sasany manararaotra mampiakatra ny hafainganam-pandeha, hany ka tsy mahafehy intsony ny lalana ka toy izao ny iafarany.
Olana goavana amin’ny ankamaroan’ireo lalana eto amintsika koa ny tsy fisian’ireo mari-pamantarana eny an-dalana. Santionany amin’ireo rond point tena mampidi-doza ny rond point By – Pass Alasora, ny sampanan-dalana By – Pass Androndrakely, ny rond point Kianja Maki Andohatapenaka, ny rond point Tsarasaotra Alarobia. Tsy misy mari-pamantarana anefa ny sasany amin’ireo lalana ireo fa samy manao izay tiany hatao ny mpamily. Tsy mandray ny andraikiny ny tompon’andraikitra fa isaky ny misy loza hatrany vao mody tonga haingana mametaka marika eny an-dalana. Fisehosehoana ny betsaka fa andrasana efa misy ra mandriaka hatrany vao mody hoe handray fepetra hentitra. Ny lalana rahateo ratsy nefa koa ny mpamily misetrasetra eo ambony familiana.